Buug uu qoray madaxweynihii dalka koonfur Afrika Nelson Mandela
» Buug uu qoray madaxweynihii dalka koonfur Afrika Nelson Mandela
buug uu qoray madaxweynihii dalka koonfur Afrika Nelson Mandela kaasi oo uu kaga hadlayo xiligii uu ku jiray xabsiga wadankaasi.
Buugaasi oo uu ugu magacdaray (Isla sheekeysigeygii) ayaa waxa uu ka koobanyahay wax yaabihii uu qoray markii uu ku jiray xabsiga ee dalkii uu madaxweynaha ka ahaa sanadihii u dhaxeeyay 1962-1990-kii.
Mandela ayaa Buugaasi kaga hadlaya dhibaatadii uu Soo maray xiligii uu xabsiga ku jiray iyo wax yaabihii ay nafsadiisu dareemaysay.
Mandela ayaa buugiisaan cusub ku cabiraya Sida uu u murugooday markii uu maqlay dhimasahda wiilkiisa isagoo xabsiga ku jira.
Mandela oo heysta abaal marinta Nobelka ee la xiriirta dhinaca Nabada ayaa Buugiisa ku sheegaya in xitaa aan loo ogolaan in Aaska wiilkiisa uu ka qeybgalo kadib markii wiilkaasi oo ahaa Curadkiisa xaaskiisii koobaad uu ku geeriyooday Shil baabuur.sanadkii 1969-kii.
Mandela oo da’diisu hada tahay 92 sabi jir ayaa xabsiga ku jiray 27-sano xiligaasi oo ay dalkaasi maamulayeen dadkii cadaanka ahaa eek u yaraa wadanka waxaana la xiray kadib markii uu kasoo horjeestay midabtakoorkii uu maamulkaasi bilaabay.
Mandeela markii xabsiga lagasiidaayay sandkii 1990-kii wuxuu wada hadal la bilabaabay maamulkii wadanka katalinaayay, markii waqtigii kadhamaaday maamulkii cadaan ka ahaana waxaa Mandela uu noqoday madaxweynihii ugu horeeyay oo madow ah dalkana kataliya sanadkii 1994-kii wuxuuna xilkiisa iska casilay 1999-kii markaasi oo mudadii uu xaqa ulahaa ay kadhamaatay.